Ilaalinta Xogta & Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Dhalashada Saint Lucia
shirkadda Our La taliye AAAA (https://immi.center) shaqaalahooduna waxay isku dayi doonaan inay ilaaliyaan macluumaadkaaga qarsoodiga ah iyo macluumaadkaaga qaaska ah. Waxaan hoos ku tusnay sida aan u ururinay oo aan u adeegsanay xogtaada.
1. Sida aan u adeegsano macluumaadkaaga iyo macluumaadkaaga
La taliye AAAA waxay soo aruurisaa oo adeegsaneysaa xogtaada iyo macluumaadkaaga shaqsiyadeed si loo xalliyo arrimaha maamulka iyo taageerada macaamiisha, si loo caawiyo macaamiisheena. Waxaan u isticmaalnaa xogtaada iyo macluumaadkaaga shakhsiyeed si aan ula soconno u hoggaansanaanta dhammaan qawaaniinta iyo heshiisyada.
2. U adeegsiga macluumaadkaaga iyo xogtaada ujeeddooyin suuqgeyn
Haddii aad rabto inaad dhammaan macluumaadkaaga shakhsiyeed aan mar dambe loo adeegsan ujeeddooyin xayeysiin ah, fadlan nagala soo xiriir info@vnz.bz waxaanan hubin doonnaa inaadan ka helin wax suuqgeyn ah ama ogaysiisyo kale oo annaga naga yimid.
3. Ururinta macluumaad shaqsiyeed iyo xog shaqsiyeed
Dhammaan macluumaadka ay shirkadeena La taliye AAAA aruurintu waxay si toos ah adiga kaaga timaaddaa, xagga macaamiishayada. Dhamaan macluumaadkaaga waa la isku halleyn karaa oo waa la keydin karaa shirkadeena iyada oo aan suuragal aheyn adeegsiga dhinacyada saddexaad. Waxaan u kaydin doonnaa macluumaadkaaga shaqsi waqti macquul ah si aan u siino taageero iyo maamul adeegyadeena.
4. Macluumaadkaaga Shaqsiyeed Shirkadayada ayaa aruurisa
Markii aan la xiriireyno shirkadaheena adigoo la xiriiraya xafiiska, taleefanka, hababka isgaarsiinta elektiroonigga ah, iyo sidoo kale booqashada kheyraadka internetka, waxaan aruurineynaa macluumaadka ku saabsan adeegsadayaasha iyo macaamiisheenna oo sameeya amarada iyaga oo adeegsanaya qaababka xiriirka kor ku xusan iyo qaababka xiriirka.
Xogta aan aruurineyno waxaa ka mid noqon kara macluumaadka ku saabsan is dhexgalka xayeysiinta, macluumaadka ku saabsan shabakadaha, macluumaadka ku saabsan nidaamyada, isgaarsiinta iyo aaladaha xiriirka, macluumaadka ku saabsan odayaasha iyo qaataha farriimaha ay soo dirsadeen ama heleen shirkaddayada. Waxaan ururin karnaa macluumaadka ku saabsan waqtiga iyo meelaha laga galayo adeegyadeena ama ilahayada. Waxaan soo aruurinaa macluumaad ku saabsan mudada xiriirada, qulqulka gujiska iyo xog kastoo kale oo nidaamka ah.
Macluumaadkaani wuxuu muujin karaa adiga iyo meelaha laga soo galo iyo shirkadaha kale.
Haddii aad ka walwalsan tahay xogtaada, waad baari kartaa boggayaga adoo ogsoon.
Codsigaaga markaan ku siinno, waxaan ku siin karnaa macluumaad aan kaa kaydino adiga, iyada oo ku saleysan aqoonsigaaga. Macluumaadkaaga uma heli karo adeegsadeyaasha kale, marka laga reebo shuruudaha fulinta sharciga iyo codsiyada rasmiga ah ee hay'adaha rasmiga ah ee xaq u leh inay sidaas sameeyaan.
Waxaan ururinaa macluumaadka ku saabsan booqdayaasha bartayada internetka, waxaan uruurinaa cinwaanno emayl ah markii aan la xiriireyno shirkadayada, shirkaddayada ayaa aruurisa lambarrada taleefanka iyo macluumaadka mobiilka markii aan la xiriireyno xaruntayada xiriirka ama taleefanka shaqaalaha.
Macluumaadka ay shirkadaheena aruuriyaan waxaa badanaa loo isticmaalaa falanqaynta gudaha iyo horumarinta adeegaheena, ilaha internetkeena iyo shaqadeena guud.
Midkastoo macluumaadkaaga ah looma wareejin doono dhinac saddexaad marka laga reebo kiisaska keenida badeecada ee adiga lagaa doonayo, iyo caymiska gaarsiintaan, markan oo dhan macluumaadka lagama maarmaanka ah waxaa loo wareejin doonaa shirkadda u soo gudbin doonta alaabta cinwaankaaga iyo caymiskaaga. shirkad. Adoo ku amraya bixinta gudbinta badeecada websaydhka ama taleefoonka, waxaad ogolaatay inaad siiso macluumaadkaaga qayb saddexaad oo mas'uul ka ah abaabulka keenista sheygan cinwaankaaga iyo caymiska.
Haddii aadan rabin inaad naga hesho farriin aan ahayn kuwa lagama maarmaanka u ah qayb ka mid ah dalabkaaga iyo dilkiisa, waxaad noogu soo qori kartaa cinwaankayaga: info@vnz.bz
5. Qaababka kaydinta iyo nolosha shelf ee macluumaadka
Waxaan ku kaydineynaa macluumaadkaaga macaamiishayada. Macluumaadkaan waxaa isticmaali doona shirkadeena isla markaana waqti macquul ah ayaa la keydin doonaa. Waxaan u baahan nahay macluumaadkan si aan u bixinno weydiimaha oo aan u xallino dhibaatooyinka ku saabsan adeegyadeena iyo shuruudaha sharciga keydinta xogta. Waxaan xaq u leenahay inaanu keydino macluumaadkan kadib markay dhammaato adeeggeenna iyo iibkeenna, xitaa haddii aadan mar dambe adeegsanaynin adeegyada shirkaddayada. Macluumaadka oo dhan waxaa lagu keydin doonaa waqti macquul ah, ilaa sharciga ama hay'adaha sharciyeynta iyo tilmaamaha ay nooga baahan yihiin inaan sii wadno waqti dheer.
6. Qolo saddexaad
Waxaan xaq u leennahay inaan ku wareejino macluumaadkaaga qolo saddexaad oo laxiriirta fulinta amarkayaga adiga. Ogolaanshahaaga dheeriga ah la'aanteed, waxaan macluumaadkaaga u gudbineynaa adeegyada gaarsiinta, shirkadaha caymiska ee la xiriira gudbinta alaabada. Waxaan xaq u leennahay inaan wareejinno cinwaankaaga oo buuxa, magaca iyo magaca, lambarka taleefankaaga iyo sidoo kale xogta kale ee lagama maarmaanka u ah in la dhammaystiro amarkan. Waxaan u siineynaa dhammaan macluumaadka shirkadaha keliya ee u shaqeeya si sharciga waafaqsan ilaalinta xogta iyo kaydinta. Codsigaaga, waxaad naga heli kartaa macluumaad annaga ah cidda iyo goorta macluumaadkaaga la siinayo.
Liisaska macaamiisheena looma wareejiyo dhinac saddexaad, marka laga reebo codsiyada ka yimaada maamulka gobolka, haddii ay jiraan.
7. Digniinta e-maylka, waraaqaha, wararka iyo dallacsiinta
Waxaan xaq u leenahay inaan kuu soo dirno ogeysiisyo, la isbarbar dhigno, taleefanka kugula soo xiriirno ama bogga internetka haddii aad annaga amar naga siisay si kasta oo suuragal ah. Dhammaan xiriidhada waxaa suurtogal ah oo keliya habka is-gaarsiinta ee aan annaga bixinno. Waxaan xaq u leenahay inaan si dhif ah kuugu soo dirno macluumaadka ku saabsan badeecadeenna, qiimo dhimista iyo dalacsiinta. Waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad hesho ogeysiisyadan adigoo raacaya tilmaamaha ama aad qoraal noogu soo dirto info@vnz.bz
8. La socoshada Xiriirka E-maylka
Iyada oo qayb ka ah kantaroolka amniga, waxaan xaq u leenahay inaan akhrino warqad kasta oo loo diro shaqaalaheena. Arinta la xiriirta waxyaabaha aan aaminka aheyn ee warqad kasta ama waxa ku lifaaqan, sida fayras, waxaan xaq u leenahay inaan ka saarno ama aan dib u dhigno.
9. Nidaamka cookie
Bartayada ayaa adeegsata cookies, kuwaas oo ah qaybo yaryar oo koodh ah iyo faylal kor u qaadaya waxqabadka bartayada kombuyuutarkaaga. Hoos waxaan ku sifeyneynaa macluumaadka marka aan ururinno cookies, sida aan u istcimaalo iyo goorta aan keydinay.
Waxaad xaq u leedahay inaad joojiso soo dejinta boodhka, laakiin isla waqtigaas, dammaanad kama qaadi karno howsha wanaagsan ee degelkeena.
Waxaad ka aqrisan kartaa waxbadan oo kusaabsan cookies-ka bogga Wikipedia halkan.
Waxaan kugula talineynaa inaad u isticmaashid buskudyada hawlgalka habboon ee saxda ah ee boggeena haddii aadan hubin inaad u baahan tahay iyo in kale. Waad joojin kartaa isticmaalka cookies-ka haddii aad hubto inaad ubaahantahay. Waa inaad fahamtaa in dhammaan cookies-ka loo isticmaalo in lagu bixiyo adeegga aad rabto inaad isticmaasho.
Waad ka hortegi kartaa biraawsarkaaga isticmaalka cookies. Waa inaad fahanto in adeegsiga shaqadan lagu xakameynayo isticmaalka biraawsarka biraawsarkaaga wuxuu badali karaa waxqabadka dhammaan bogagga aad booqato ama damacsan tahay inaad booqato. Caadi ahaan, curyaaminta buskudku waxay curyaamineysaa astaamaha qaarkood iyo awoodaha goobta, marka waxaan kugula talineynaa inaadan curyaaminin cookies-ka.
Kukiyada la xiriira E-maylka
Bartayada ayaa xusuusan karta isticmaaleha haddii aad mar hore naga diiwaangashan tahay, si aan kuu tusno ogeysiisyo gaar ah oo loo adeegsan karo isticmaaleyaasha diiwaangashan ama aan iska qorin. Waxaan bixinaa adeegyo diiwaan gelinta warsidaha ah. Markaan adeegsaneyno shaqadan, waxaan isticmaalnaa cookies ka xasuusto.
Wax ka qabashada amarada kukirashada
Websaydhkeenna ayaa ku xasuusnaanaya amarradaada cookie, badeecooyinka aad dooratay waana lagu xasuustaa markii aad u isticmaasho degelkeenna dheeraad si ay u fududeyso howlaha ay ka mid yihiin baajinta ama tafatirka amarkaaga.
Foomamka Kukiyada ee laxiriira
Haddii aad buuxiso foomam boggayaga internetka, cookiesku wuxuu badbaadin karaa xogta isticmaalehaaga isticmaalka mustaqbalka ama xiriirinta.
Boggeena internetka waxaa suurtagal ah in la isticmaalo cookies-ka ay bixiyaan dhinacyada saddexaad ee ay aaminaan. Hoos waxaan ku sifeyn doonaa faahfaahin badan oo ka mid ah cookies-yada saddexaad ee aad la kulmi karto markaad isticmaaleysid bartayada.
Waxaan u isticmaalnaa Google Analytics, oo aan ubaahanahay inaan falanqeyno bartayada. Kukiyada ayaa la socon kara waqtiga aad ku qaadatay boggena, bogagga aad booqato, waxyaabaha aad doorbideyso, waqtiga aad booqato bartayada.
Waad ka baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan macluumaadka cookie ee Google Analytics halkan.
Mar labaad, waxaan ku xasuusineynaa in goobta ay sifiican u shaqeyneyso, waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto cookies-da la beddelo.
Waxaan qaadeynaa talaabooyin amni oo ku kaydinta macluumaadkaaga si aad u qatar ah waxaana qaadnaa dhammaan tallaabooyinka macquulka ah si aan u xaqiijinno ammaankooda Iyada oo ku xidhan xogta, waxaan u istcimaalaynaa howlaha ilaalinta sirta ah, sir gelinta, xakamaynta gelitaanka, gurmadka, heerarka wareejinta iyo xakamaynta sharafta deegaanka si looga ilaaliyo xogtaada khasaaraha ama si xun u isticmaalka.
DIIWAANKA: Ma keydinayno faahfaahinta kaarkaaga deynta ama deynta. Xogta kaarkaaga aad adeegsan jirtey had iyo jeer waa la xafidayaa oo lama keydin.
11. Su'aalaha iyo codsiyada
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan siyaasada gaarka ah, ilaalinta macluumaadka ama isticmaalkooda howlaheena, waad nagala soo xiriiri kartaa macluumaadkan: info@vnz.bz
La taliye AAAA
© 2020, Dhalashada Saint Lucia Kana sheekayso